Matipi Ekukurumidza Kununurwa KweHemorrhoid Zviratidzo | Hemorrhoid Kurapa
Matipi Ekukurumidza Kununurwa KweHemorrhoid Zviratidzo
Iwe hausi wega uri mukutambudzika kwako kwemamota. Zvinongoita sekudaro nekuti uyu hausi iwo musoro unowanzokurukurwa. Chokwadi, vanhu vazhinji vakakukomberedza vanowana kusagadzikana kwakafanana kwauri kusangana nako. Nekushandisa anotevera matipi uye maitiro, you just may be able to find some good treatment options that will give you some relief for hemorrhoids, whether they are internal or external.
Zvikamu: Medical Mhinduro
Matagi: tsinga, donut pamutsago, kurwadziwa maronda, chando kurongedza, kubvisa hemorrhoid
Mazano Ekudzora Kusagadzikana Kwako Yakabatana neHemorrhoids